Magaalada qadiimiga ahee Bulaxaar oo laga furay Iskuul Boordhin ah | Somaliland Hargeisa City
Waxay ugu dambayntii u mahadcelisay wasiiraddu jaaliyadda u dhalatay Bullaxaar ee soo caawisay dhismaha dugsigan, waxanay dhiirigelisay iskaashiga iyo waxwada qabsiga bulshada.
Wasiirka Madaxtooyada JSl Mudane Xirsi X. Cali Xasan oo isna munaasibadda ka hadlay ayaa ugu horayn u mahadceliyay jaaliyadda bullaxaar ee dugsigan ku soo tabarucay dhismihiisa, isla markaana ballanqaaday inay xukuumadda JSl taageri doonto mashaariic horumarineed oo ay ugu horrayso bannaynta boqcaddii bullaxaartii hore oo kaymo garan-waa ahi ka baxeen, isla markaana ah ay tahay goob taariikhi ah oo ay ku aasanyihiin aasaar badan oo qadiimi ahi. Wasiirku wuxu sheegay inay eegayaan sida ay boqcaddan bullaxaartii hore qarisay kayntu iyo sida loo banayn karo.
Waxa isna munaasibadda ka hadlay Guddoomiyaha Gobolka Saaxil Mudane Cali Maxamed Cilmi oo sheegay inay degmada Bullaxaar nasiib u yeelatay inay noqoto degmadii u horraysay ee yeelata dugsi boarding ah gobolka Saaxil, waxanu u mahadceliyay jaaliyadda reer bullaxaar ee maalgelisay dhismaha dugsigan, waxanu dhiirrigeliyay waxwada qabsiga iyo iskaashiga bulshada ee horumarinta dalka.
Waxa iyaguna munaasibaddan ka hadlay maamulka degmada Bullaxaar, qaar ka mid ah madax-dhaqameedada iyo odayaasha degmada Bullaxaar xubno ka mid ah kuwaasoo u mahadceliyay jaaliyadda u dhalatay degmada Bullaxaar waxqabadkan soo maalgelisay iyo weftiga ka Wasiiraddu hoggaaminaysaba.
Si kastaba ha noqotee, waxay tani noqonaysaa waxqabadkii ugu weynaa ee dadweynaha u dhashay Bullaxaar soo taraan degmadooda iyo dadkooda baahan, sidoo kalena markii ugu horraysay ee wefti miisaankan lihi u tagaan Bullaxaar waxqabad noocan ah.
Waxa la aas’aasay dugsiga Boarding ka Bullaxaar sannadkii 1959-kii, waxana ka baxay ama waxku bartay rag badan oo aqoonyanno meelo kala duwan jooga iyo qaar badan oo hormoodka iyo siyaasiinta dalka ka mid ah. Wuxu xidhnaa ama aanu jirin muddo ku dhaw afartan sannnadood.
Dugsiga Bulaxaar Boarding wuxu aad ugu rayn doonaa boqolaal iyo kumayaal carruurta ayniga dugsiga gaadhay ee dadweynaha xoola dhaqatada iyo danyarta ah ee degmada Bullaxaar ee aanay hore ugu suurtagalayn inay carruurta u reeban waxbarashada, waxanay taasi sababi jirtay in xilliga barwaaqada dhulku yahayna ay ardayda dugsiga korodho, marka laga guuro gubankana ay yaraadaan.
Dhinaca kale, magaalada Bullaxaar waxay ka midtahay deegaanada ugu qadiimisan ama taariikhda fog ee JSL sida Saylac oo kale, waxanay wakhti ka mid ahayd dekedaha dalka jiray iyo magaalo xadaarad saraysa iyo ganacsi leh oo gacanka aad ugu xidhnayd.
Haseyeeshee, dabaylo aasay magaalada kadib, waxa dhacday inay dadkii uga soo guuraan magaalada Hargeysa balse sida uu wasiirka Madaxtooyadu sheegay waxa ku aasan taariikh badan iyo aasaar qadiimi aah halkii ay ku taallay Bullaxaartii hore ee aasantay oo dhul illaa 3km2m, kuna dhaw halka ay xarunta degmada Bullaxaar immika tahay.
« Halkan ka daawo Abaal-marintii Qaran ee qiimee qofkaaga oo Hargeysa ka dhacday, Somaliland
Maanta oo ay ahayd maalintii xuska sanad-guuradii 32 aad ee maalintii dhagax-tuurka »